C++ compiler ပြသနာ - MYSTERY ZILLION
C++ compiler ပြသနာ
December 2010 edited December 2010 in C++
ကျွန်တော. အိမ်က စက်မှာ ... compile လုပ်လိုက်ရင် ဒီလို massage မျိုးပြပါတယ်.
[FONT="]║[/FONT]•Error NONAME05.CPP 1: Unable to open include file 'IOSTREAM.H' [FONT="]▒[/FONT]
[FONT="]║[/FONT] Error NONAME05.CPP 2: Unable to open include file 'CONIO.H' [FONT="]▒[/FONT]
.. #include <iostream.h> လို.ရိုက်လို.အဆင်မပြေရင်.. #include<iostream> လို.ပြောင်းရိုက်လို.ရတယ်လို. ကြားလိုး ရိုက်ကြည်.သေးတယ်. ဒါပဲ ပြန်ပြတယ်. ကူညီကြပါဦး . ဗျာ..
#include "iostream.h" လို့ရော စမ်းဖြစ်သေးလား။
ဘာ Compiler လဲ မသိဘူး။
compiler ကတော. MS DOS ပါ .. CPU က တော. 32 bit, win xp ပါ .
MS DOS ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Compiler မရှိပါဘူး အဲဒီတော့ Compiler နာမည်မသိရင် ခင်ဗျား C++ File ကို Compile လုပ်တဲ့ Command ကိုပြောပါ အဲဒါဆိုရင်တော့ Compiler ကိုမှန်းလို့ရမယ် အခုကတော့ ဘယ်လိုမှ အကြံပေးလို့မရပါ။
clt+9 ပါ ..
achillles wrote: »
ဟိုက်.... ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ပါဗျာ Screenshot သာဖမ်းခဲ့ပါတော့
Environment Variables မထည့်ထားသေးလို့ဖြစ်မယ်။ Environment Variables ကော ထည့်ပြီးပြီလား ? နောက်ပြီး code အပြည့်အစုံပြပေးဗျာ။ code ထဲမှာ လွဲနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်။
အင်း စေတန်ပြောလို့ နည်းနည်းရိပ်မိပြီ Turbo C ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တာက Menu တစ်ခုထဲမှာပါလိမ့်မယ် မသုံးတာကြာပြီဆိုတော့ ဘယ်ထဲလဲတော့ အသေအချာမသိတော့ဘူး Setting တစ်ခုပါတယ် include ဆိုတဲ့ Option ထဲမှာ ကိုယ် Install လုပ်ထားတဲ့ Folder ထဲက include folder ကိုပေးထားမထား ကြည့်ပါ မပေးထားရင် အဲဒါထည့်ပေးပါ include path ကိုမသိလို့ header file တွေကိုရှာမရဖြစ်နေတာပါ။
ကြည့်ပေးစရာ အဲဒီ့ဆော့ဝဲမရှိလို့ Menu ကိုတော့ကိုယ်တိုင်သာ လိုက်ရှာကြည့်ပါ ညာဘက်ဆုံး Menu ကနေစပြီးရှာ သိပ်မရှာရပါဘူးတွေ့မှာပါ။
ကြောင်တောင်တောင်နဲ.ဗျာ.. . အိမ်က စက်က ..
သင်တန်းကနေ... .တစ်စက်တည်းက . ပြန်ကူးပြီး. ပြန် ကွန်ပိုင်း . လုပ်လိုက်တော. ရသွားတယ်.
ကျေးဇုူး တင်ပါတယ်.. .. အခု လို ကူညီ ကြတဲ.အတွက်